Zyrtec vs. Benadryl: Misiyano, kufanana, uye izvo zviri nani kwauri - Zvinodhaka Vs. Shamwari | Chikunguru 2021
Nhau, Wellness Hutano Dzidzo, Zvipfuwo Dhinda Dzidzo Yehutano Nhau Checkout Nharaunda Kambani, Info Info Info Info, Hutano Dzidzo Nharaunda, Kambani Hutano Dzidzo, Nhau Zvinodhaka Info Kambani, Hutano Dzidzo Nharaunda, Wellness Kambani
Kuru >> Zvinodhaka Vs. Shamwari >> Zyrtec vs. Benadryl: Misiyano, kufanana, uye izvo zviri nani kwauri
Zyrtec vs. Benadryl: Misiyano, kufanana, uye izvo zviri nani kwauri
Kuongorora kwezvinodhaka & misiyano mikuru | Conditions kurapwa | Kubudirira | Inishuwarenzi kufukidza uye mutengo kuenzanisa | Zvimwe zvinokanganisa | Kubatana kwezvinodhaka | Yambiro | MIBVUNZO
Kuhotsira, meso anomhanya, kunzwa kunhuwa kwese-izvi ndizvo zviratidzo zvehurwere zvinogona kukunetsa. Kana iwe uchinetseka nezviratidzo zvechirwere, hausi wega. Kupfuura MaAmerican mamirioni ruzivo rwekurwara mukati megore rose. Allergies ndiyo yechitanhatu inotungamira yechirwere chisingaperi gore rega.
Iko hakuna kurapwa kweanorwara, asi iwe pasina mubvunzo uchaona yakawanda yemakemikari mishonga kana uchishanyira yako yemunharaunda chemishonga. Zyrtec naBenadryl ndiwo maviri anozivikanwa pamusoro peiyo-the-counter (OTC) mishonga inoshandiswa kudzikisira zviratidzo zvehurwere. Mishonga yese iri miviri inogamuchirwa neUnited States Chikafu neDrug Administration (FDA).
Zyrtec naBenadryl ma antihistamines, kana H1 receptor blockers. Ivo vanoshanda nekuvharidzira histamine. Histamine chinhu chinoitwa nemuviri wako panguva yekusagadzikana, zvichikonzera izvo zviratidzo zvinotambudza. Nekuvharira histamine, Zyrtec naBenadryl vanobatsira kubvisa zviratidzo zvekurwara.
Benadryl (diphenhydramine) chizvarwa chekutanga antihistamine. Chekutanga-chizvarwa antihistamines inowanzo kukonzeresa kugadzikana uye kurara uye inogona kukanganisa kubatana uye kutyaira. Zyrtec (cetirizine) yechipiri-chizvarwa antihistamine. Kunyangwe Zyrtec (Zyrtec ruzivo) ichiri kungokonzeresa kukotsira uye mimwe mhedzisiro, mushonga unokonzeresa kukotsira zvishoma uye mashoma mhedzisiro mhedzisiro uye yakachengeteka kana uchida kutyaira kana kushandisa michina.
Ndeupi mutsauko mukuru pakati peZyrtec neBenadryl?
Zyrtec naBenadryl mazita ezita re cetirizine uye diphenhydramine, zvichiteerana. Zyrtec naBenadryl ese ari maviri antihistamines anovhara histamine receptors uye anopa allergy zororo. Zvese zvigadzirwa zvinogadzirwa mu brand uye generic uye mune akasiyana mafomati kuti akwane akawanda mazera uye murwere zvido.
Misiyano mikuru pakati peZyrtec naBenadryl
Kirasi yemishonga Antihistamine (H1 receptor blocker) Antihistamine (H1 receptor blocker)
Brand / generic chinzvimbo Brand uye generic Brand uye generic
Chii chinonzi generic zita Cetirizine hydrochloride Diphenhydramine hydrochloride
Ndeapi mafomu (s) ayo mushonga unouya? Hwendefa, manyuchi, chewable piritsi, kuparara piritsi, emvura gels
Zvakare seZyrtec-D (antihistamine + decongestant: cetirizine / pseudoephedrine) Macapsule, chewable piritsi, kirimu, gelcap, mvura, mvura gels, jekiseni, pfapfaidzo, tsvimbo
Zvakare inowanikwa mune yakasanganiswa michina yakadai seBenadryl-D, Benadryl Allergy Plus Kusanganiswa
Ndeipi muyero wakajairwa? Vakuru: 10 mg nemuromo kamwe zuva nezuva pazvinenge zvichidikanwa
Vana: zvinosiyana nezera. Tevera mapakeji mirairo kana kubvunza kuna chiremba wevana Vakuru: 25 kusvika 50 mg nemuromo maawa mana kusvika matanhatu sekudikanwa
nzira dzechisikigo dzekuunza BP pasi
Vana: zvinosiyana nezera. Tevera mapakeji mirairo kana kubvunza kuna chiremba wevana
Inguva yakareba sei kurapwa kwacho? Zvinosiyana Zvinosiyana
Ndiani anowanzoshandisa mushonga? Vana nevakuru Vana nevakuru
Mamiriro ezvinhu akarapwa naZyrtec naBenadryl
Kana iyo FDA yakatenderwa Zyrtec sechigadzirwa chemushonga muna 1995, yaive nezviratidzo zvitatu: kurapa mwaka allergic rhinitis, perennial allergic rhinitis, kana chisingaperi urticaria. Zyrtec yave ichiwanikwa pamusoro pekambani kubva 2007. Kunyange izvo zviratidziro zvichiri kushanda, ruzivo rwekupakata runotaura kuti Zyrtec inoshandiswa kuzorodza kwenguva pfupi yemhino dzinomhanyisa, kusemura, mvura kana maziso anonhuwa, uye kuvaviwa kwemhino / huro nekuda kwehuswa fever kana zvimwe zvekufema.
Ruzivo rwekupakata kwaBenadryl rwunoti mushonga unogona kushandiswa kurapa zvenguva pfupi zviratidzo zvechirwere (runny nose, Kuhotsira , maziso anonhuwa kana anodonha mvura, kuvaviwa kwemhino nehuro) zvinokonzerwa nehuswa fever kana zvimwe zvinopesana. Benadryl inoshandiswawo kurapa mhino dzinomhanyisa uye kuhotsira kubva kune yakajairwa kutonhora.
Mamiriro Zyrtec Benadryl
Mwaka wegoregic rhinitis Ehe Ehe
Perennial allergic rhinitis Ehe Ehe
Chirwere urticaria (mikoko / ganda rinopenya) Ehe Kunze-chitaridzi
Kununurwa kwenguva pfupi kwezviratidzo nekuda kwehuswa fivha, kurwara, kana kutonhora Ehe Ehe
Zyrtec kana Benadryl inoshanda zvakanyanya here?
Pane dhata diki kwazvo uchienzanisa mafomu emuromo eZyrtec neBenadryl. Imwe fundo achifananidza mishonga miviri yezvokudya zvekudya. Chidzidzo chacho chakagumisa kuti Zyrtec yakanga yakafanana nekushanda kwaBenadryl uye yakatora nguva yakafanana kuti itange kushanda. Zyrtec zvakare yaive nehurefu hwekuita (hwakagara kwenguva refu).
TO ongororo yemabhuku weBenadryl achienzaniswa neasina-anti-antihistamines akagumisa kuti ese antihistamines aive akafanana anoshanda, asi kuti matsva antihistamines, saZyrtec, akakonzera kushoma sedation.
ICanada Society yeAllergy uye Clinical Immunology (CSACI) inokurudzira ma antihistamine matsva senge Zyrtec anoshandiswa mukufarira ekare antihistamines saBenadryl. Iyo CSACI inoti iyo nyowani antihistamines yakachengeteka, isina-kugara, uye inoshanda. Vanotaura kuti Benadryl inosanganisirwa neakakosha mhedzisiro senge sedation, kurara zvisirizvo, uye kukuvara kwemotokari, zvingangoita tsaona nerufu, uye zvinongofanirwa kushandiswa senzira yekupedzisira.
Nekuti ese ari maviri Zyrtec naBenadryl maOTC, iwo mushonga unoshanda kwazvo kwauri unogona kutariswa nekuyedza uye nekukanganisa kuti uone kuti ndeupi mushonga unobatsira zviratidzo zvako uchikonzera mashoma mhedzisiro. Wehutano wako mupi anogona kukutungamira nesarudzo yechigadzirwa futi.
Kuvhavha uye mutengo kuenzanisa kweZyrtec vs. Benadryl
Nekuti iwo aripo pamusoro-e-the-counter, Zyrtec naBenadryl vari zvisingawanzo kuvharwa neinishuwarenzi kana Medicare Chikamu D kana zvirongwa zveAdvantage. Kumwe kusarudzika kunogona kushanda.
Bhokisi remapiritsi makumi matatu e10 mg cetirizine (generic Zyrtec) inodhura madhora gumi nemaviri. Kadhi reSingleCare rinogona kuunza mutengo pasi kusvika pamadhora mashanu kana uine tsamba yechiremba.
Bhokisi remapiritsi makumi maviri nemaviri e25 mg diphenhydramine (generic Benadryl) inodhura madhora mapfumbamwe. Kadhi reSingleCare rinogona kudonhedza mutengo kusvika kumadhora mana kana uine mushonga unobva kuna chiremba.
Tora kadhi reSingleCare rekunyorera kadhi
Kazhinji yakafukidzwa neinishuwarenzi? Kwete Kwete
Inowanzo kufukidzwa neMedare Chikamu D? Kwete Kwete
Standard muyero 30, 10 mg mahwendefa 24, 25 mg mahwendefa
Chaizvoizvo Medicare copay N / A. N / A.
SingleCare mutengo $ 5 $ 4
Zvakajairika mhedzisiro mhedzisiro yeZyrtec vs. Benadryl
Zyrtec naBenadryl vane mhedzisiro yakafanana. Mhedzisiro inowanzoitika kurara kana kukotsira, kuneta, kuoma muromo, dzungu, uye kutemwa nemusoro.
Iyi haisi rondedzero izere yemhedzisiro. Mimwe mhedzisiro yakaipa inogona kuitika. Bvunza wako mupi wezvehutano nezvezano rezvehutano.
Side maitiro Zvinoshanda? Kakawanda Zvinoshanda? Kakawanda
Kusaziva (kurara zvakanyanya) kana kukotsira Ehe 13.7% Ehe 22%
Kuneta Ehe 5.9% Ehe % haina kutaurwa
Muromo wakaoma Ehe 5% Ehe 5%
Dzungu Ehe piri% Ehe 2.5%
Kutemwa nemusoro Ehe > 2% Ehe 2.5%
Nausea Ehe > 2% Kwete -
Kunobva: FDA Chinyorwa (Zyrtec) , Vanyori 'Dhijitari Referensi (Benadryl)
Kudyidzana kwezvinodhaka zveZyrtec vs. Benadryl
Iwe haufanire kutora Zyrtec kana Benadryl nedoro kana sedating mishonga nekuda kwekuwedzera kwekufema uye / kana wepakati tsinga system mhedzisiro. Iko kusanganisa kunogona kukonzera kunonoka kufema pamwe nehusimbe hwakawanda, kukotsira, uye kukanganisika kwepfungwa. Benadryl zvakare haifanire kutorwa nezvigadzirwa zve potassium mumafomu akasimba eiyo madhiragi nekuda kwenjodzi yezvironda zveronda.
Iyi chati haisi rondedzero izere yekubatana kwezvinodhaka. Kumwe kudyidzana kwemishonga kunogona kuitika. Bvunza wako mupi wezvehutano kuti uwane izere runyorwa rwekudyidzana kwezvinodhaka.
Zvinodhaka Kirasi yemishonga Inopindirana neZyrtec Inobatana naBenadryl
Doro Doro Ehe Ehe
Topiramate Anticonvulsants Ehe Ehe
Ziprasidone Antipsychotic Ehe Ehe
Venlafaxine Zvinodzvinyirira Ehe Ehe
Tramadol Kurwadziwa kweopioid kunodzora Ehe Ehe
Temazepam Benzodiazepines Ehe Ehe
Metaxalone Tsandanyama dzinozorodza Ehe Ehe
Potassium (solid dosage mafomu) Potassium Kwete Ehe
Yambiro dzeZyrtec neBenadryl
Usashandise Zyrtec kana Benadryl kana iwe wakambove neanogadzirisa maitiro kune chero chigadzirwa.
Usashandise Zyrtec kana iwe wakambove neanogadzirisa maitiro kune antihistamine inonzi hydroxyzine.
Bvunza wako mupi wezvehutano usati washandisa Zyrtec kana Benadryl kana uine matambudziko echiropa kana eitsvo.
Bvunza wako mupi wezvehutano usati washandisa Zyrtec kana Benadryl kana iwe ukatora chero mishonga yekugara.
Zyrtec kana Benadryl zvinogona kukotsira.
Doro kana mishonga inonyaradza inogona kuwedzera kukotsira.
Chenjerera pakutyaira kana kushandisa michina kusvika waziva kuti mushonga unokubata sei.
Mira kushandisa Zyrtec kana Benadryl uye bata chiremba wako kana iwe uine zvinopesana neyakafanana nemikoko. Kana iwe uine anaphylaxis yakakomba (kunetseka kufema, kuzvimba kwemiromo, rurimi, kana huro), tsvaga kurapwa kwekukurumidza.
Chengeta pasingaonekwi nevana.
Bvunza wako mupi wezvehutano usati washandisa Zyrtec kana Benadryl kana iwe uri nepamuviri kana kuyamwisa.
Kuwedzera yambiro dzeBenadryl:
Usashandise Benadryl kuita kuti mwana arara.
Usashandise Benadryl nechero chimwe chigadzirwa chine diphenhydramine (inosanganisira zvigadzirwa zvekurara, musanganiswa wekutonhora / mishonga yekurwisa, kana makomputa emisoro).
Bvunza wako mupi wezvehutano usati washandisa kana iwe uine glaucoma, yakawedzera prostate / kunetseka kuita weti, kana dambudziko rekufema senge emphysema kana chisingaperi bronchitis.
Benadryl anogona kukonzera kunyanya kukotsira , iyo inowedzerwa nedoro uye sedatives.
Kunakidzwa kunogona kuitika, kunoitika zvakanyanya muvana kupfuura kune vakuru.
Inowanzo bvunzwa mibvunzo nezve Zyrtec vs. Benadryl
Chii chinonzi Zyrtec?
Zyrtec chizvarwa chechipiri antihistamine. Iine chinongedzo cetirizine. Inowanikwa OTC mu brand uye generic fomu.
Chii chinonzi Benadryl?
Benadryl chizvarwa chekutanga antihistamine, iine chinongedzo diphenhydramine. Iwe unogona kutenga Benadryl pamusoro-iyo-kadhi mune brand kana generic fomu.
Zyrtec neBenadryl zvakafanana here?
Zyrtec naBenadryl ese ari maviri antihistamines ayo anobatsira kudzikisira Allergy zviratidzo. Benadryl chizvarwa chekutanga antihistamine uye chinowanzo kukonzera yakawanda mhedzisiro. Zyrtec yechipiri-chizvarwa antihistamine uye inokonzeresa mashoma mhedzisiro.
Zvimwe zvinowanzozivikanwa antihistamines iwe zvaungaona pasherufu zvinosanganisira Claritin (loratadine), Allegra (fexofenadine), uye Xyzal (levocetirizine).
kuronga b ndinotora nguva yakareba sei
Zyrtec kana Benadryl zvirinani here?
Mishonga iyi yese inoshanda zvakafanana, asi Zyrtec inogona kukotsira zvishoma. Zyrtec ichiri inogona kukonzera kukotsira futi, hazvo. Sezvo zvese mishonga iripo OTC, unogona kuyedza imwe kuti uone kuti inovandudza sei zviratidzo zvako. Wemishonga wako anogona kukubatsira kusarudza chigadzirwa chakakodzera. Ive neshuwa yekuzivisa wemishonga wako nezve chero ehutano mamiriro aunayo uye chero mishonga yaunotora.
Ndinogona here kushandisa Zyrtec kana Benadryl ndichiri nepamuviri?
Mukudzidza kwemhuka, Zyrtec haina kukonzera kuberekwa kusanzwisisika. Zvisinei, pane hapana zvidzidzo zvakakwana inoitwa muvakadzi. Naizvozvo, Zyrtec inongofanirwa kushandiswa mukuzvitakura kana zvichinyatso kudikanwa. Anopa hutano hwako anogona kukutungamira mune ino mamiriro.
Kana zviri zveBenadryl, zvakare zvakurudzirwa kuti inofanira kushandiswa mukuzvitakura chete kana zvichinyatso kudikanwa. Bvunza wako mupi wezvehutano kuti akutungamire.
Ndinogona here kushandisa Zyrtec kana Benadryl nedoro?
Kwete. Unofanira nzvenga doro paunenge uchitora mishonga iyi yemishonga. Iko kusanganisa kunogona kuwedzera njodzi yekufema kushushikana (kunonoka kufema, kusawana oxygen yakakwana), izvo zvinogona kuve zvine njodzi. Inogona zvakare kukonzeresa ekuwedzera mhedzisiro, kuwedzera mhedzisiro yemishonga, uye kukonzera kukanganisika.
Kana iwe ukanwa doro uye uchida kurapa allergies ako, yemhino pfapfaidzo iri nani sarudzo. Wemishonga wako anogona kukubatsira iwe kuwana yakakodzera nasal spray.
Ndeipi antihistamine yakanyanya kunaka?
Zvakanakisa antihistamine zvinoenderana nemunhu mumwe nemumwe. Vamwe vanhu vanopika naAllegra, nepo vamwe vachida Xyzal. Chaizvoizvo inyaya yekuyedza uye kukanganisa, zvinoenderana nekuti unoshanda sei mushonga kwauri uye nemhando ipi yemhedzisiro iwe yaunosangana nayo. Mubatsiri wako wehutano anogona kukubatsira kusarudza antihistamine kuedza.
Zyrtec inobatsira here neanogadzirisa maitiro?
Ehe. Zyrtec inogona kubatsira neanogadzirisa maitiro. Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge Nekudaro, kana iwe uchinetseka kufema kana kana uine kuzvimba kwakatenderedza kumeso kana muromo, iwe unofanirwa kutsvaga kurapwa kwekukurumidza.
Ma antihistamine anoderedza immune system here?
Antihistamine hainetese immune system. Mishonga inoderedza kana kudzvinyirira immune system inosanganisira yemumuromo kana inhaled steroids, mishonga inoshandiswa kudzivirira kurambwa mushure mekuiswa kwechimwe nhengo, uye mimwe mishonga inoshandiswa kune autoimmune mamiriro.
Maitiro ekugadzirisa chirwere cheshuga muimbwa
Chii chinonzi benzodiazepines?
Zvakachengeteka here kushanda kana iwe uchitora maantibioti?
Iko kwakanaka-kwemukadzi bvunzo uye nei kuchikosha
Mishonga inorwisa mabhakitiriya 101: Ndezvipi uye nei tichiida?
Latuda mhedzisiro uye maitiro ekuzvidzivirira
Klonopin vs. Ativan: Misiyano, kufanana uye izvo zviri nani kwauri
Unogona here kuita Vyvanse kugara kwenguva yakareba?
Ndinogona here kurwara nefuru ndichiri nepamuviri?
Nzira shanu dzemasikati kuchengetedza nguva dzinogona kukanganisa hutano hwako
IVF inodhura zvakadii?
zvakanaka here kutora zuva rehutano hwepfungwa
mushonga wepamusha wehutachiona hwehutachiona
zviratidzo zvekutanga zvekunyevera nezvechirwere cheshuga muvakuru
inoita zuva rinotevera piritsi rinogara richishanda
chikafu chakanakisa chekudya nefivha
chii chiri chakazara tembiricha yemuviri mumadhigrii fahrenheit